ဘေးဥပဒ်ကိုစာရင်း - ညျဘုရားသခငျ၏စကားသံကိ | Apg29
by ပညာရှင် Hans Jansson , Uppsala
"လိမ္မာပါးနပ်" နှင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြနေသောအခြေအနေတွင်ဟေရုဒ်မင်း၏လုပ်ရပ်များ၏ဘေးဥပဒ်တစ်ခုခုရှိပါသည်။ အဲဒီကမ်ဘာဦးကမျြးစာ၌တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုမှငါ့ကိုမစသေညျ။
"အခုမြွေသည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင် '1 လုပ်သောလယ်တို့၌ရသောတိရစ္ဆာန်ထက်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ။ မာရ်နတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့နယ်ပယ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပေါ်ထွန်းသောကြောင့်သည် "listiges" အသွင်သဏ္ဌာန်၌ရှိ၏။
ကျနော်တို့ခြင်္သေ့တို့သည်လုယက်ဖမ်းရန်တာကောက်ကျစ်ကိုအသုံးပြုသည်ကိုငါသိ၏။ ဒါဟာသိပ်မာရ်နတ်စေသည်။ ဟေရုဒ်အန္တိအကယ်စင်စစ်လိမ္မာသည် ဖြစ်. သခင်၏မတော်မတရားသဘာဝကျော်နိုးမဟုတ်ခဲ့သူသူ၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏စကားသံကိုခုခံသောအခါ, ထိုထိတွေ့ခဲ့သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်များအတွက်ဒါသည်သူ၏သားကောင်များသားကောင်ထောင်ချောက်တစ်ခုသင့်လျော်သောအချိန်ကာလသည်မကောင်းသောအရှင်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ထိုသို့ဟေရောဒိ၏အခါသမယအပေါ်ပြောပါတယ်နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ကိုသတ်ရန်သူ၏ဆိုးယုတ်သောစရိုက်များဖျော်ဖြေ: "ထိုအခါတစ်ရက်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအချိန်သို့ရောက်လာသော" ။ ထောင်ချောက်တစ်ခုသင့်လျော်သောအချိန်တွင်မာရ်နတ်, ၎င်းတို့၏သားကောင်များအတွက်ဒါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအသက်တာ၌အနီးကပ်ယေရှုအားအသကျရှငျအရေးကြီးသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့လွယ်ကူသောလုယူရာဥစ္စာဖြစ်လာပါဘူး။
မှတ်စုစာအုပ်] တှငျကြှနျုပျတို့အစိုးရရှေ့နေ (မာရ်နတ်) သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဦးမည်ကရှာဖွေနေသည်မည်သို့ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။ "မြေကြီးတလည်လည် မှစ. နှင့်တဝိုက်လမ်းလျှောက်ရာမှ။ " 3: သူအစိုးရရှေ့နေထူးမည်ဘယ်မှာသညျဘုရားသခငျ၏မေးခွန်းကိုတွင်
ဒါဟာသူသညျဘုရားသခငျ၏ကြှနျယောဘအားသတိပေးသော, ထို့ကြောင့် obs စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုဆုတ်ယုတ်မှုပေမယ့်အလျှင်းမပြောင်းလဲသွားတယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း] ကြောင်းထောက်ခံခဲ့သည်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှမဟုတျပါရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမျြးစာကိုဘုရားသခင်ထံမှကောင်းသောလက်ဆောင်များပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏ဟုဖြစ်ပါသည်။ 4
ဘုရားသခင်၏ကျွန်မာရ်နတ်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူလိုက်နာမှုမှဘာသာရပ်များမှာပေမယ့်။ ဘုရားသခင်၏ကျွန်] ob ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ transmigration ရန်သူကငျြးပကနေအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၌အကြှနျုပျတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌စိတ်ရင်းမှန်လျှင်သူမြင်သည်။ ကျနော်တို့မဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်ဒုက္ခ၌ရှိကြ၏။ အရာကိုပြုလုပ်သူသည်မိမိအချိန်ကို5'' တိုတိုကြောင်းကိုသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မာရ်နတ်သည်ယေရှုကိုအလွန်ကြီးစွာသောဒေါသအမျက်ရှိခြင်း "မြေကြီးပေါ်ကဆင်းလာတော်မူကြောင်းကိုပြောပါတယ်အဖြစ်။
အထက်ကျမ်းစာ၌တစ်ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့၎င်း, မာရ်နတ်ပြောပြသည်။ ခြင်္သေ့ရဲ့စာရင်းပေးထားသောကြောင့်အသားစားရဲ့မေးရိုး၌ထပြီးဆုံးကြောင်းလုယူရာဥစ္စာ၏နွားeftersläntrarenဖြစ်ပါတယ်။ Predator ခြင်္သေ့သည်အမဲလိုက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံထွက်ပြေးလာသောကြီးနွားကိုအတူတက်စောင့်ရှောက်ကြဘူးတဲ့သူတွေကိုစောင့်ဆိုင်း။
ထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောခရစ်ယာန်များကိုတစ်ဦးဝိညာဉျရေးရာအားနည်းဘဝအသက်ရှင်ရန်ဝံ့ကြောင်းငါ့ကိုအံ့သြသွားတယ်။ သူတို့အန္တရာယ်များသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုခြိမ်းခြောက်ဘယ်မှာရှင်သန်ကြောင့်နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဟေရုဒ်အန္တိဒုက္ခအံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့သညျ။ တိုင်းမသိမ်းရသေးသောသူတစ်ဦးသည်မိမိဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာ၏ကရုဏာတော်မှာလုံးဝဖြစ်ပါတယ်။ စာရိတ္တနှင့်အကျင့်စာရိတ္တဝန်ခံရမည်အများကြီးကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်အပြစ်တရား၏လက်မှလူကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ပြုသညျယရှေုကိုသာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
လူသားတွေဟာတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူဘဲထာဝရစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးသေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာထာဝရအဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြရမည်ဖြစ်သည်သောဤဝိညာဏဝိညာဉျသဖြစ်ပါတယ်။ မာရ်နတ်များအတွက်အားနည်းချက်လုယူရာဥစ္စာအဖြစ်ဘုရားသခင့လူနေမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်မဟုတ်သူမည်သူမဆို။ ထိုသူက, ခိုးယူသတ်ပြီးမှdöda.7ထွက်မယ့်ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏ ပို. ပို. အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားမထောင်သောအခါနတ်ဆိုးကလူကိုထိန်းချုပ်ပုံကိုနေ့စဉ်နားထောင်ကြလော့။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မာရ်နတ်ရဲ့မတော်မတရားသဘာဝတစ်ခုမြင်သာထင်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူကစာတန်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံအရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး, အဘို့လွင်ပြင်၌နထေိုငျ ": ယရှေုသညျတော၌စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်သောအခါ, သောဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာသူကရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအကြားအသက်ရှင်နှင့်ကောင်းကင်တမန်များ '' 8 သူ့ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်ဤလောက၏နှင့်အပြစ်သဲကန္တာရထဲတွင်ဝိညာဉ်ရေးရာဒုစရိုက်ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ဤရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာ၌ဝိညာဉ်ရေးမှာအားနည်းချက်ရှိသည့်နေရာကိုတစ်ဦးကနေရာအရပ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့, ယရှေုသကဲ့သို့ပင်ကောင်းကင်တမန်များကိုကျွေးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရေတွက်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ ယရှေုထိန်းသိမ်းထားနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဤတောထဲကလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူကမာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်ရှိရာတောသို့ထွက်သွားကြ၏သည့်အခါယရှေုသညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောနှငျ့ပွညျ့စုံခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော်နေဆဲသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သူသွေးဆောင်မှုöken9ထားခဲ့တယ်။
ဟေရုဒ်အန္တိ၏အမှု၌သူသည်မိသားစုနှင့်တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ထင်မှတ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးအယူမှားဝါဒ၏ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုမျှလမ်းအတွက်လုပ်ဖို့ဘုရားသခင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘိုးဘေး Antipater အချိန်ကတည်းကယခင်အခန်းကြီး, သူ့မိသားစုရောမအင်ပါယာသစ္စာစောင့်သောအတွက်ငါမြင်ပြီအဖြစ်။ သူတို့ကရောမအင်ပါယာတန်ခိုးအားဂုဏ်ပြုကာဘုရားအဖြစ်ဧကရာဇ်ကိုးကွယ်ကြ၏။
သူတို့ကအများအားဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်၎င်းတို့၏အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်သူမည်သူမဆိုဆန့်ကျင်ကရုဏာမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ရောမအင်ပါယာရဲ့သမိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာယိုယွင်းဧကရာဇ်၏၎င်း၏ဆွေးမြေ့ပျံ့နှံ့အပေါင်းတို့နှင့်လူမှုရေးအတန်းကိုဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားမှုနှင့် resolution ကို၏ဤမာနထောင်လွှားနိုင်ငံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သောဤသူကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်ဤလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်တည်လျှင်ကံမကောင်းစွာပြုလုပ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်နှင့်ငျြ့တရား, တူညီတဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်သွားလိမ့်မည်။ ဒါဟာအမည်ရသာသညျယရှေုခရစ်တော်နှင့်အတူရနိုင်သောဝိညာဉျရေးရာကာကွယ်ရေးအားနည်းစေပြီး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ဧဝံဂေလိတိုင်းပြည်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုများအတွက်တစ်နည်းအတွက်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အပြစ်တရားလူကြီးလူကောင်းအချိန်မီအခါသမယ ပို. ပင်ထိုကဲ့သို့သောအသားစားအားနည်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်, ဒီတိုင်းပြည်အပေါ်ယူပါ။
ကဟေရုဒ်အန္တိအဘို့ဖြစ်သကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အမှန်တရား, ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည်မိမိအပြစ်တရား၏ဟုချွန်ထက်စကားများရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သာဒီလမ်းအတွက်မင်းသား၏အတွင်းပိုင်းသို့ထိုးဖောက်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏စိတ်အတွင်းအနာပေါက်အာရုံကြောထိခိုက်လာသောအခါဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှိပ်စက်တာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေမကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့အရေးကြီးသောဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်သန်ဖို့ဆိုလြှငျ, ကငါတို့အားထာဝရချမ်းသာရှိသည်ဖို့အတှကျအပွစျကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းအညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ဟေရောဒိတူသောသူများသည်အပြစ်နှင့်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုညျဘုရားသခငျ၏စကားများထွက်သယ်ဆောင်သူတဦးတည်းကိုဖမ်း, သတ်ချင်, လိမ့်မည်တနေ့မျက်နှာညျဘုရားသခငျ၏တရားသဖြင့်စီရင်။ "ခန္ဓာကိုယ်ကိုသတ်ပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမသတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြပါနှင့်: ကျွန်တော်တို့ကိုထို့ကြောင့်နှလုံးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာသောဘုရားသခငျ၏စကားများယူကြပါစို့။ "ငရဲ 1 °ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ဖကျြဆီးနိုငျသောသူကို သာ. အလိုရှိကြောက်လန့်။
ငါကလည်းအဖြစ်ဒါပေမယ့်လူကိုအခမဲ့အလိုတော်ရှိပါတယ်။ ဟေရုဒ်အန္တိမွကွေီးဘုန်းပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုမှသူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြသူထိုမိန်းမသည်နောက်တော်သို့လိုက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ "မတော်မတရားသဘာဝ" က Driven ကျနော်တို့ဟေရောဒိအချိန်ကိုမိမိတို့၌ဆိုးသောစရိုက်များဖျော်ဖြေဖို့လာသောအခါအဘို့, eftersläntrarenအပေါ်အသားစားအဖြစ်အတောင်ပံအတွက်စောင့်ဆိုင်းဘယ်လိုမြင်ကြပြီ။ သူကသူမကိုအလွယ်တကူက "သားရဲ၏" မေးရိုးသို့ဆောင် ခဲ့. ဆက်နိုင်အောင်အားနည်းခဲ့သည့်အခါအချိန်။
မှတ်စုများ: 1) 1 Gen.3: 1st 2) 1 Pet.5: အဋ္ဌ 3)] ob.1:74)] ak.1: 17 (1917 နှစ် trans ဆိုတဲ့။ ) 5) ဗျာ 12 12 ။ 6) Apg.4: 12 7)] oh.10: 10 8) Mark.1: 13 9) Luk.4: 1st 14. 10) Matt.1O: 28
ပညာရှင် Hans Jansson, Uppsala